ပနျးပှားကိုတို့ Wobbegong ငါးမန်းအချက်အလက်
ပနျးပှားကိုတို့ Wobbegong ငါးမန်း
အဆိုပါပနျးပှားကိုတို့ wobbegong ငါးမန်းအများဆုံးထူးခြားသော-ရှာဖွေနေငါးမန်းမျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားတိရိစ္ဆာန်များ၎င်းတို့၏ဦးခေါင်းနှင့်တစ်ဦးပြားစေအသွင်အပြင်ကနေတိုးချဲ့ထူးခြားတဲ့, အကိုင်းအခက်ပေါ်၌ရှိသောအမြှေးရှိသည်။ ဤအငါးမန်းပထမဦးဆုံး 100 ကျော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း (1867) ဖော်ပြထားပေမဲ့, သူတို့ကလူသိမရှိကြပေ။
ပနျးပှားကိုတို့ Wobbegong ငါးမန်းသတ်မှတ်ခြင်း
အခြားအ wobbegong ငါးမန်းလိုပဲ, ပနျးပှားကိုတို့ wobbegongs ကြီးမားသောဦးခေါင်းနှင့်ပါးစပ်, ပြားကောင်များနှင့်တစ်ဦးကျားရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ရှိသည်။
ဤရွေ့ကားငါးမန်းက၎င်း၏ pectoral ယပ်ဖို့ငါးမန်းရဲ့ဦးခေါင်း၏ရှေ့ကနေချဲ့ထွင်ကြောင်းအလွန်အမင်း branched အခါအသားအရေပေါ်၌ရှိသောအမြှေး 24 26 အားလုံးအတွက်ရှိသည်။ ဒါဟာအစက၎င်း၏ဦးခေါင်းပေါ်နှာခေါင်းလေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်း branched ခဲ့သည်။ ဤသည်ငါးမန်းမှောင်မိုက်အစက်အပြောက်များနှင့်ကုန်းနှီးပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်အတူပေါ့ပါးအသားအရေကျော်မှောင်မိုက်လိုင်းများပုံစံများရှိသည်။
တစ်ဦးမေးခွန်းထုတ်စရာအစီရင်ခံစာ 12 ခြေရင်းနားမှာတဦးတည်းပနျးပှားကိုတို့ wobbegong ငါးမန်းခန့်မှန်းပေမဲ့ပနျးပှားကိုတို့ wobbegongs များသောအားဖြင့်, အရှည်အကြောင်းကို4ပေဦးရေအများဆုံးအရွယ်အစားကြီးထွားဖို့စဉ်းစားနေကြသည်။
အဆိုပါ genus Eucrossorhinus ဂရိစကားများ eu (ကောင်းသော), krossoi (ပနျးပှားကိုတို့) နှင့်ကြံ့ (နှာခေါင်း) မှလာသည်။
Do ပနျးပှားကိုတို့ Wobbegong ငါးမန်းအဘယ်မှာရှိ Live?
ပနျးပှားကိုတို့ wobbegong ငါးမန်းအင်ဒိုနီးရှား, သြစတြေးလျနှင့်နယူးဂီနီကိုချွတ်အနောက်တောင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိအပူပိုင်းရေထဲမှာနေထိုင်နေကြရသည်။
သူတို့ဟာအကြောင်းကို 6-131 ခြေရေနက်နဲသောပင်လယ်၌, သန္တာကျောက်တန်းအနီးရှိရေတိမ်ပိုင်းရေကိုပိုကြိုက်တယ်။
ဒီမျိုးစိတ် benthic (အောက်ခြေ) ငါးနှင့်ကျောရိုးအပျေါမှာညအချိန်တွင်ကျက်စား။ တစ်နေ့တာအတွင်းထိုကဲ့သို့သောလိုဏ်ဂူနှင့်အထစ်အောက်တွင်အဖြစ် Shelter ဒေသများအတွက် wobbegong ငါးမန်းကြွင်းသောအရာ tasseled ။ သူတို့၏ခံတွင်းအဆိုပါ tassseled wobbegong ငါးမန်းတောင်ကတခြားငါးမန်းတပြင်လုံးကိုမျိုချတှေ့မွငျရပွီဒါကြောင့်ကြီးမားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါပနျးပှားကိုတို့ wobbegong ငါးမန်းဖြစ်ပါတယ် ovoviviparous အမျိုးသမီးရဲ့ကြက်ဥသူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဖွံ့ဖြိုးဆိုလိုတာက။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကာလအတွင်းငယ်ရွယ်ကြက်ဥအနှစ်ကနေအမိဝမ်း၌မိမိတို့အာဟာရရယူပါ။ ခွေးများမွေးဖွားရှည်လျားသည့်အခါနှင့်ပတ်သက်ပြီး 7-8 လက်မရှိပါတယ်။
Wobbegong ငါးမန်းယေဘုယျအားဖြင့်လူသားခြိမ်းခြောက်စဉ်းစားကြသည်မဟုတ်, သို့သော်သင်ကဤငါးမန်းများ၏တဦးတည်းကိုဖြတ်ပြီးလာလျှင်ချွန်ထက်သွားများနှင့်အတူပေါင်းစပ်သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူပုံဖျက်ကာ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်, နာကျင်ကိုက်စေနိုင်ပါသည်။
ဤရွေ့ကားငါးမန်းဟာ IUCN နီစာရင်းအပေါ်ခြိမ်းခြောက်အနီးအဖြစ်စာရင်းဝင်နေကြတယ်, ခြိမ်းခြောက်မှုများမှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်၎င်းတို့၏သန္တာကျောက်တန်းနေရင်းဒေသများနှင့်ရ၏ဆုံးရှုံးမှုများပါဝင်သည်။ အများကြီးမဟုတ်ဒီမျိုးစိတ်အကြောင်းကိုလူသိများသည်, ဒါပေမယ့်လူဦးရေကသူတို့အနီးခြိမ်းခြောက်စာရင်းများအတွက်အခြားအကြောင်းပြချက်တည်းဟူသောကျဆင်းနေခံရဖို့ပေါ်လာပါသည်။ သောကြောင့်သူတို့ရဲ့လှပသောအရောင်နဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့အသွင်အပြင်၏, ဤငါးမန်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်ငါးပြတိုက်အတွက်ထားရှိမည်နေကြသည်။
Bester, C. ပနျးပှားကိုတို့ Wobbegong ။ သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်၏ဖလော်ရီဒါပြတိုက်။ ဇူလိုင်လ 31, 2015 ဝင်ရောက်။
Campagno, အယ်လ်, Dando, အမ်နှင့်အက်စ်မုဆိုး။ ကမ္ဘာ့ဖလား၏ 2005 ငါးမန်း။ Princeton တက္ကသိုလ်နှိပ်ပါ။ 368pp ။
Compagno, LJV, 1984 Eucrossorhinus dasypogon (Bleeker, 1867) ။ FAO မှမျိုးစိတ် Catalog ။ vol ။ ကမ္ဘာ၏ 4. ငါးမန်း။ ယနေ့အထိလူသိများငါးမန်းမျိုးစိတ်တစ်ခုမှတ်ချက်တွေနဲ့ရုပ်ပြ catalog ။ အပိုင်း 1 - Lamniformes မှ Hexanchiformes ။ FAO မှငါး။ Synop ။ 125 (4/1): 1-249 ။ ရောမမြို့: FAO ၏။ FishBase ၌တည်၏။ ဇူလိုင်လ 31, 2015 ဝင်ရောက်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငါးမန်းတိုက်ခိုက်မှုဖိုင်မှတ်တမ်း။ သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်၏ 2015 ခုနှစ်ဖလော်ရီဒါပြတိုက်။ ဇူလိုင်လ 31, 2015 ဝင်ရောက်။
Pillans, R. (SSG သြစတြေးလျ & Oceania ဒေသတွင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, မတ်လ 2003) 2003 Eucrossorhinus dasypogon ။ ခြိမ်းခြောက်မျိုးစိတ်များ၏ IUCN နီစာရင်း။ ဗားရှင်း 2015,2 ။
အကြေးခွံများ, အိပ်ချ်ရုပျပုံမြား: ငါးမန်းနောက်ထပ်ငါးမန်းလုံးမျို။ National Geographic ။ ဇူလိုင်လ 31, 2015 ဝင်ရောက်။
အဆိုပါ Whale ငါးမန်းအကြောင်းအချက်အလက်
Whale ငါးမန်းအကြောင်း 10 အချက်အလက်
အဆိုပါ Mako ငါးမန်း, ပင်လယ်ပြင်အတွင်းအမြန်ဆုံးငါးမန်း
ကျောင်းစာအုပ် Paryer: ဘုရားကျောင်းနှင့်ပြည်နယ်များ၏ Separation
Aries အမျိုးသမီးများအတွက် venus
Excel ကိုအတွက် F2 ရာထူးအမည် Key ကိုအတူ Edit ကိုဆဲလ်
Hill - အမည်အဓိပ္ပာယ်နှင့်မူလအစ
အဆိုပါအော်ပရာ Lohengrin ၏အနှစ်ချုပ်
Juval Aviv နယူးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများခန့်မှန်း
Rudolph ၏ "စစ်မှန်သော" ပုံပြင်နီ-နှာခေါင်း reindeer
အသုံးပြုသူ-Friendly Form များဖန်တီးနည်း
ဘယ်လိုရုပ်ပြစာအုပ်စာရေးဆရာ Be မှ
အဆိုပါ Soul ခြောက်ဘွဲ့
အဆိုပါဗီးနပ်စ် Libra က Man
အဆိုပါ Astrolabe: Navigation များအတွက်ကြယ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် Timekeeping
ပထမဦးစွာ Barbary စစ်ပွဲ: Derna ၏တိုက်ပွဲ
တစ်ဦးက New ကောလိပ်မှလွှဲပြောင်းဖို့ကောင်းသောအကြောင်းရင်း
လက်တင်အတိုကောက်: NB ဓိပ်ပာယျ, အသုံးပြု, ဥပမာများ
အင်္ဂလိပ် un Tonton အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုပါသလား
နည်းဥပဒေ 20: LIFT, Drop နှင့်နေရာ; မှားရာဌာနထံမှကစားခြင်း